ktmagar's blog <]:-): सबैको प्यारो कसरी बन्ने?
सबैको प्यारो कसरी बन्ने?
नोट: समय छ भने मात्र पडनुस्, अइलेइ भन्दिन्छु, यो झुर पनि लाग्न सक्ला र नमिल्न नि सक्छ, नपड्दा नि हुन्छ । पडि भ्याएसी तोर्पे लेख्दा रैछस् भन्न पनि पाइ । मेन कुरा त यो लेखिरने मान्छे पनि त्यति लोकप्रिय र सबैको सुप्रिय भने होइन । आफूलाई लागेको कुरा यसो लेख्दिम् न त भन्ने भएर मात्र... सबैको माझ कसरी प्रिय व्यक्ति बन्ने कुरामा यो आधारित छ ... है :)
सबैको माझ प्रिय कसरी बन्ने भन्ने कुरामा केइ कुरो राखेँ है त...
लास्टै कम बोल्नुस्, बोल्नु पर्ने कुरा त बोल्नुस् नि फेरी; थोरै, चाइने, अलिकति मात्र बोल्नुस्, यसो गरे तपाई गम्भीर देखिनुहुनेछ । यो बिल्कुल केइ समयबाट मात्र परिचित अनुहारहरूको माझ लागू गर्नुस् । जति कम बोल्नुहुन्छ, तपाईका कुरो बेठिक भए पनि ध्यान दिई सुनिनेछ । तपाईको स्थान महत्त्वपूर्ण बन्नेछ । याद रहोस् यो हालसालै साथी वा परिचित बनेकाहरूका निम्ति मात्र लागू गर्नुस् ।
भर्खर भेट्नुभएको व्यक्तिहरू सँग भने अलि बोल्न प्रयास गर्नुस् । केई प्रश्न राख्नुहोस्, धेरै कुरामा सहमति जनाउनुस्, केइमा विमति जनाउनुस् तर थप कुरा राख्नुस् । पुरै असमर्थ/बेठीक/हुँदै होइन कइलेइ नभन्नुस्... तपाईलाई कुनै कुरा मन नपरे वा व्यक्तिको भनाइ मन नपरे पनि बाजाबाज हुने गरि, डिस्कसनमै कइलेइ नलाग्नुहोस् ।
माथिका कुरा १ र २ लाई मान्दै, कुन ठाउँमा के बोल्ने कति बोल्ने बुझ्दै जानुहोस् । मुख्य कुरा नयाँ व्यक्तिहरू माझ तपाईको बोली नै सबैको सामू प्रिय बन्ने माध्यम हो र मात्र व्यबहार ।
माथिका कुरो १ र २ फलो गर्दै जानूभयो भने तपाईका केइ मिल्ने साथीहरू बनिसकेका छन् । अब तपाईले को कस्तो खालको छ भन्ने बुझि सक्नुभएको छ । तपाईं मजाकका विषय वा अलि महत्त्वपूर्ण कुरा वा कुनै पनि विषय प्रतिको विचार तपाईले बनाउन सक्नुभएको साथीहरूको अगाडि निर्धक्क राख्न सक्ने बन्नु भो ।
परिचित व्यक्तिहरू माझ भने आफ्नो व्यबहार र तपाईको कार्यशैली नै प्रिय बन्ने साधण हो । बोली भन्दा काम बढी गर्नुस् । उनीहरूको कुरा पनि ध्यान दिएर सुन्नुस् । परिचित साथीहरूको साथ बन्नुहोस् तर आफ्नो महत्व पनि कायम राख्नुहोस् न कि तपाईं सधैँ कसैको सघौटे/पुच्छर बन्नुस् । बोल्नुहुन्छ? पुर्ण रूप दिने सक्षम राख्ने कुरा मात्र बोल्नुस्, सक्नुहुन्न भने - सिधै सक्दिन भन्नुस्, कसैको चित्त दुख्ला भनेर नसोच्नुस् । अर्को कुरा परिचित व्यक्तिहरू माझ कइलेइ आधारहिन धाक धक्कु नदेखाउनुहोस् । भलै नयाँ व्यक्तिको सामू धाक लगाएर इम्प्रेस गर्न भने धाक लाउनुस् गफ भइरहेको विषयमा... तर झुटो शान दिएर के काम?
तपाई परिवारमा (आमा, बाबू, दाजु, दिदी आदि) सँग भने धेरै बोल्नुस्, किनभने परिवारका सदस्यहरू सधैँ तपाईकै साथमा हुन्छन् । सकेसम्म आफ्नो सत्ते कुराहरू नै बाँड्नुस् । दुख सुन्नुस्, रुनुस्, हाँस्नुस्, पुराना कुरा सुनाउनुस्, भविष्यका सोच बताउनुस् र परिवारका कुराहरू पनि चाँसोको साथ सुन्नुस् ।
यो अनुच्छेद लेख्नेको विचार "सबैको प्रिय बन्न सक्नु पनि कला" हो र कुनै कलाको सिमा हुदैँन । तपाईं, तपाईं हुन सक्नु नै सबैको प्रिय बन्न सक्ने पहिलो प्रयास हो, सबै भन्दा पइले आफैँलाई जान्नुस्, बुझ्नुस् जुन यो लेखिरने मान्छे पनि प्रयासरतै छ । साँची, तपाईं यो पनि सोच्न सक्नुहुन्छ कि कसैका सामू प्रिय बन्न खोज्नुको काम के त? कुरो सै पनि हो । सबैको प्रिय बनेर के हुनी हो र? वा अन्य कुनै धारणा होला तपाईंको । तपाईको प्रयास संसार भर या यो देश भर नै चिनिऊँ भन्ने पनि होला अथवा अरू केइ तर तपाईले माथि देखि याँ सम्म पड्दै आउनुभाको हो भने पक्कै तपाईलाई प्रिय बन्ने रहेर भएकै हुनुपर्छ । जे होस् यो दुनियाँ भरका कुरा छाडेर आफ्नो सर्कलका माझ तपाईं प्रिय बन्ने प्रयास गर्नुस् भन्ने सानू सुझाव मात्र । मुख्य कुरो तपाई कत्तिको प्रिय बन्नु भो भन्ने नाप्न चाँइ मिल्दैन । आफू कतिको प्रिय बनेँ भनेर बुझ्न चाँइ अर्को लेखमा...